February 2021 – Newsharpal24
February 26, 2021 adminLeaveaComment on झलनाथले खोले दाहाल र नेपालले गर्न लागेको ‘ठूलो राष्ट्रघात’
काठमाडौं । नेकपाभित्र प्रचण्ड नेपालका नेताहरुले सरकारलाई सबैभन्दा प्रहार गरेको विषय हो एमसीसी । अहिले तिनै प्रचण्ड नेपालका नेताले आफैले राष्ट्रघाति भनेको एमसीमसी पारित गर्नुपर्छ भनेर भन्न थालेका छन् । राष्ट्रपति हुने लोभमा र्याल काँडेर बसिरहेका सो समूहका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले खनालले एमसीसी संसदबाट अगाडि बढ्ने बताएका छन् । […]
February 10, 2021 February 10, 2021 adminLeaveaComment on प्रचण्ड-माधवले सबै जनतालाई विरोधसभामा सहभागी भयर देश जोगाऊन एक जुट हुन आहवान गरेका छन् भनेका छन्
२८ माघ, काठमाडौं । नेकपा (प्रचण्ड-माधव) समूहले आज काठमाडौंमा आयोजना गरेको विरोधसभालाई १४ जना नेताहरुले सम्बोधन गर्ने भएका छन् । संसद विघटनको विरोधमा आयोजित सभालाई अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपालसहित झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, रघु जी पन्त, देव गुरुङ, जनार्दन शर्माले सम्बोधन गर्ने छन् ।यसैगरी सन्तकुमार चौधरी, रामचन्द्र झा, रामकुमारी झाँक्री, महफुज अन्सारी, भानुभक्त जोशी, […]
February 10, 2021 adminLeaveaComment on प्रचण्ड-माधव समूहको प्रदर्शन सुरु! गरि खाने जनताको प्रदर्शनप्रति आक्रोश
२८ माघ, काठमाडौं । प्रचण्ड–माधव समूहले काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शनसहित विरोध सभा गर्ने भएपछि उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन प्रभावित भएको छ ।विरोधसभा अघि पुल्चोक, माइतीघर मण्डला, केशरमहल, त्रिपुरेश्वर र जमलबाट बिहान ११ बजेदेखि जुलुस सुरु हुने प्रचण्ड–माधव समूहको संघर्ष समितिले जनाएको छ । ती जुलुस सुन्धारामा पुगेर मूल जुलुसमा मिसिई भृकुटीमण्डपमा पुगेर सभामा परिणत हुने छन् ।पुल्चोकबाट निस्कने जुलुस […]
February 9, 2021 adminLeaveaComment on प्रचण्डले भने, ओलीले सिन्को भाँच्नु भएको छैन!अहिले जे गर्नु भएको छ, त्यो स्टन्ट मात्र हो ।
२७ माघ, काठमाडौं । नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘तपाईं कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष कि हिन्दु महासंघको’ भनी प्रश्न गरेका छन् ।अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुमा आवद्ध सञ्चारकर्मीसँग मंगलबार भएको छलफलका क्रममा प्रचण्डले कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष हो कि हिन्दु महासंघको अध्यक्ष हो ? भन्ने प्रश्न ओली आफैंले उठाएको बताए । अयोध्या, राम […]
February 9, 2021 adminLeaveaComment on रोयल्टीवापत एक वर्षमा उठ्यो साढे ५ अर्ब, धेरै आम्दानी विद्युतबाट
२७ माघ, काठमाडौं । नेपालमा विभिन्न प्राकृतिक स्रोतको उपभोगबाट एक वर्षको अवधिमा साढे ५ अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रोयल्टी संकलनबाट कुल ५ अर्ब ४३ करोड ९ लाख ३८ हजार ३ सय रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको छ । यो रकम तीन वटै तहमा बाँडफाँट भएको छ […]
काठमाडौं । मासिक रू एक सयमा नेपालको सस्तो विद्यालय समता स्कुलमा पढ्दै आएकी अस्मिता अधिकारी विश्वको महं’गो स्कुल मध्ये एकमा पढ्न पाउने भएकी छन् । संसारको महं’गो मध्ये एक र सुविधायुक्क्त आइगलन कलेज स्वीजरल्याण्डमा छात्रवृत्तिमा पढ्न पाउने भएकी हुन् । जोन कर्लेटले १९४९ मा स्थापना गरेको आइगलन विश्वकै विशिष्टमध्येको एक हो । सानैदेखि तीक्ष्ण बुद्धिकी […]
ग्यास्ट्राइटिस भएकाले एसिडिक खानेकुराको प्रयोग गर्नुहुँदैन । जसमा कागती, सुन्तला, निबुवा, भोगटे आदि फल पर्छन् । यस्तो समस्या भएकालाई टमाटरले पनि थप असर पु-याउँछ ।टमाटरमा पनि एसिडिक हुने भएकाले ग्यास्ट्राइटिसले दिने पीडालाई बढोत्तरी गर्छ । कसै–कसैले यसको थोरै प्रयोगले त्यति असर नगर्ने भए पनि खाँदैनखानु उत्तम हुन्छ । दूध र दूधजन्य पदार्थ पनि ग्यास्ट्रिकको समस्या […]
तपाईंहरुलाई केपी ओली सर्वसत्तावादी हुन् भन्ने लागेको होला । होइन । उनी सर्वसत्तावादी हुन खोजेका होइनन् । ओलीको ढंग नपुगेको हो । शुरुमै ढंग पुर्‍याउन नसकेका हुन् ।सरकार बनेपछि ओलीले संघीयतासँग जोडिएका ३५० जति कानून बनाउनुपर्ने थियो । पहिलो पटक कानून बनाउने उत्तम अवसर पाएका थिए । जसरी २०४८ मा कांग्रेस नेतृत्व सरकारलाई रोक्न सकिँदैनथ्यो, […]